Home Wararka Muxuu yahay ujeedada kulanka Qoor Qoor iyo Rooble ee Dhuusamareeb?
Muxuu yahay ujeedada kulanka Qoor Qoor iyo Rooble ee Dhuusamareeb?
Ra’iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta ku wajahan Magaalada Dhuusamareeb xarunta DG Galmudug. Safarkaan ayaa lagu micneeyay mid leh ujeedooyin badan.
Rooble iyo Qoor Qoor ayaa labada waxa ay ku shaqaynayaan qorshaha siyaasadeed ee uu dajiyay Fahad Yasin, kaas oo la doonayo in dib loogu soo doorti Farmaajo. Dhanka kale Rooble oo qiiq isku qaris ah ku jira ayaa dhankiisa ku sheegay in safarkiisa in uu yahay kid ku saabsan yahay hubinta Howlaha la xiriira qabsoomidda Doorashada Golaha Shacabka BFS.
Wafdi hordhac u ah Wasiirka Koowaad ee Xukuumadda Federaalka ayaa tagay Magaalada Dhuusamareeb si ay qayb uga qaataan soo dhaweynta Maxamed Xuseen Rooble oo ujeedkiisu yahay dardargelinta & hubinta Doorashada Golaha Shacabka Baarlamaanka 11-aad.
Galmudug waxaa maalin kahor lagu soo gabagabeeyay Doorashada Senatarada Aqalka Sare BFS, sida qorshuhu yahay waxaa maalmaha soo socda la bilaabaya in la doorto Xildhibaannada Golaha Shacabka.
Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble ayaa ballanqaaday in uu safar ku tago Dowlad-Goboleedyada si uu dardargeliyo qabsoomidda Doorashada Xildhibaannada Golaha Shacabka Baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka Dadban ee Heer Federaal ayaa rejo ka muujiyay in doorashada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federalka oo keliya laga doortay labo kursi ay soo idlaado Dhammaadka December 2021.
Rooble ayaa Ilaa iyo markii uu ka soo noqday dalka Qatar waxa uu billabay in uu si toos ah ula shaqeeysto Farmaajo iyo Fahad Yasin.